Phoenix Learning Center ;
Phoenix Learning Center ကို ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့တွင် Founder Dr. U Thiha မှ စတင်တည် ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ Managements ဘာသာရပ်များကို ပြည်တွင်းပြည်ပ အတွေ့အကြုံရှိသော ဆရာ/ဆရာမ များအား ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဆရာ/ ဆရာမ လိုအပ်ချက်ရှိသော ဒေသများ၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပညာရေး အလှမ်းဝေးခဲ့ရသော သင်တန်းသား/ သူများ၊ မိမိနေအိမ်မှသာ သင်ကြားလိုသော သင်တန်းသား/ သူများကို ပညာရေးအဆက်မပြတ်စေရန် ရည်ရွယ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကိုဗစ်ကာလတွင် ပညာအလှူဒါနခေါင်းစဉ်ဖြင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ သင်တန်းသား/ သူများကို သက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ယနေ့တိုင် သင်ကြား ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Phoenix Learning Center မှ ကျောင်းသားများကို အချိန်ပေးပြီး ယခုအခါ ပိုမို Quality ပြည့်မှီ သော နည်းစနစ်များရှိသည့် Microsoft teams software ဖြင့် Forever Online Learning Management Association group မှ ပံ့ပိုးပေးပြီး live streaming သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီး ဆရာနှင့်ကျောင်းသား အပြန်အလှန် မေးမြန်း‌ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ အဖွဲ့လိုက် စာဆွေးနွေးခြင်း ၊ Private Chat ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ခြင်း၊ သင်တန်းချိန်အတွက် Alarm ပေးခြင်း၊ Mobile Phone ရှိရုံဖြင့် သင်ကြားနိုင်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ သင်တန်းများအား အခမဲ့ တက်ရောက်လေ့လာနိုင်ခြင်း ၊ မိမိ Carrier Development အလိုက် E book များအခမဲ့တစ်သက်တာလေ့လာနိုင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ group link ပေးပြီး video share ပေးမည့် ပညာဒါန အတန်း မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် ပညာလို၍ အချိန်ပေးနိုင်သော အချိန်တိကျသော ကျောင်းသားများအတွက် အကျိုးရှိစေမှာ သေချာပါတယ်ရှင်။ မိမိတို့ Career Development ဖြစ်စေရန်အတွက် မိမိအိမ်မက်တွေ ဈေးမကြီးစေပဲ တနေရာတည်းမှာ Management and Computer ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Management and Computerအတန်းများကို စိတ်ဝင် တစား မေးမြန်းလာတဲ့ သင်တန်းသား/ သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
For MMEDU Mobile App URL
အထက်ပါလင့်မှ Download ဆွဲပါ။ Android Version သာရရှိနိုင်ပါသေးကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
For Microsoft Team App URL
အထက်ပါလင့်မှ Download ဆွဲပါ။ သို့ပဟုတ် Play Store မှ Download ဆွဲပါ။
For Laptop SCORM package
How to join Microsoft Teams From Laptop
Phoenix Learning Center မှ နောက်လဖွင့်မည့်သင်တန်းများ
by Phoenix Learning Center Admin - Thursday, 19 November 2020, 3:43 PM
Phoenix Learning Center မှ COVID ကာလ ပညာဒါန သင်တန်းများကို လစဉ် တန်းခွဲသစ်များ ဖွင့်လှစ်၍ သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။ December လဆန်းပိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ပညာဒါန အတန်းများကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာ
Business Management Administration Course
Sale & Marketing Management Course
Website Design Fundamental Course
တို့ဖြစ်ပါတယ်။ တန်းခွဲသစ်များကို 25-July-2020 မှ စတင်၍ 5-Augest-2021 ညနေ (၃)နာရီ အထိ အပ်နှံလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းများအား 5-February-2021 မှ စတင်၍ သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဘာသာချင်းစီအတွက် Digital Certificate Fee and Registration fee အတွက် 5000Ks သာကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး သင်တန်းကြေး အခမဲ့ ပညာဒါန အဖြစ် သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလ ( ၁ ) လ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆက်သွယ်မေးချင်ပါက (+959)964841387 (သို့) Phoenix Learning Center Facebook Messenger သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်စုံးစမ်းနိုင်ပါတယ်။
Advance Level Project Management
❓Project စတင်ချိန် ကနေစ ပြီး Project ပိတ်သိမ်း ချိန်ထိ ဘာတွေ လုပ်ဆောင်ရမလဲ...
❓ ဘယ်လို Project Management Plan တွေနဲ့ တည်ဆောက် ရမလဲ....
❓ ဘယ်လို Document တွေလိုအပ်ပါသလဲ......
❓ Project တစ်ခုကို အောင်မြင်စွမ်းဆောင်ဖို ဘယ်လိုအချက် တွေက အထောက်အကူ ဖြစ်မလဲ....
❓Microsoft Project 2019 Application ဖြင့် ဘယ်လို Project တစ်ခုကို စနစ်တကျ ဖန်တီးမလဲ..... စတာတွေ ကို ဒီအတန်းမှာ ပိုမိုသိရှိရပြီး အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အသေးစိတ်ပါဝင် သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
✅ သင်ဟာ Project Management အကြောင်း ကောင်းစွာ နားလည်ချင်သူ သိုမဟုတ် စနစ်တကျ Project ကို စီမံခန့်ခွဲ လိုသူ တစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ဒီ Advance Level Project Management အတန်းကို တက်ရောက်ဖို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
✅ Project Management Professional (PMP) သင်တန်း များ တက်ရောက်ရန် အချိန်မပေး နိုင်သေးသော သူများ နှင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဒေသများတွင် Project Management နှင့်ပတ်သက်ပြီး လိုအပ်သည် များကို သိလိုသူများခြင်း၊ စာတွေ့ နဲ့ လက်တွေ့ချိတ်ဆက်လိုသူ များကို ရည်ရွယ်ချက် များဖြင့် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
✅ Advance Level အတန်းတိုင်းတွင် စာသင်ကြားမှု ပိုမို ထိရောက်စေရန် လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားကြောင်းလည်း ကြို တင်အကြောင်းကြားပါရစေ။
Chapter 1: The Project management process groups
Chapter 2: Stakeholders and Risk Register
Chapter 3: The Project Integration and Scope management
Chapter 4: The Project Time Management
Chapter 5: How to apply tasks and resources with Microsoft Project 2019
Chapter 6: The Essential tracking and ManagingaProject
Chapter 7: The Project Cost Management
Chapter 8: The Project Procurement Management
Advance Business Management & Administration
Advance Level Business Management Administration
📌Business Management Administration ဘာသာရပ်ဆိုတာ စီးပွားရေးတစ်ခုကို စတင်မယ့်သူတွေ ၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စီမံခန့်ခွဲမယ့်သူတွေနဲ့ မိမိတိုရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် တစ်ခုရဲ့ ထိပ်တန်းနေရာမှာ ရပ်တည်လိုသူတွေအဖို မဖြစ်မနေလေ့လာသင်ကြားကြရမယ့် ဘာသာရပ်လို ပညာရှင်အများစုက စံနမူနာပြုထားကြတဲ့ အရာတစ်ခုပါ ။
📌Business Management Administration ဆိုတဲ့အတိုင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာ အဓိကပါဝင်နေတဲ့ Organization Structure (အဖွဲအစည်းတစ်ခု တည်ဆောက်ပုံ) ၊ Administration (အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း) ၊ Operation( လုပ်ငန်းခွင် လည်ပတ်မှုအပိုင်း) ၊ Marketing (ဈေးကွက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်မြှင့်ရေးပိုင်း) ၊ HRM( လူသားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲရေးပိုင်းတွေ)၊ Financial Management ( ဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲမှု) နှင့် (Strategy) မဟာဗျူဟာ ချမှတ်ပုံအမျိုးမျိုးစတဲ့ အဓိကကျပြီး နက်နဲကျယ်ပြန့်လှတဲ့ နယ်ပယ်တွေကို ကဏ္ဍအလိုက် ခြုံငုံလေ့လာရမှာပါ ။
📌ဒလိုလေ့လာနိုင်ခြင်းအားဖြင့် ပြင်ပဘဝမှာ လက်တွေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု တည်ထောင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အချိန်မှာ မလေ့လာထားရခြင်းထက် လေ့လာထားခြင်းက ပိုပြီး ခရီးပေါက် မြောက်အောင်မြင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
✅ သင်ဟာ Business Management Administration အကြောင်း ကောင်းစွာ နားလည်ချင်သူ သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ကိုင်မည့်သူများ ၊စတင်လုပ်ကိုင်နေသော်လည်း စီးပွားရေးသဘောတရားများကိုမသိသောကြောင့် အဆင်မပြေဖြစ်နေသူများ ၊စီမံခန့်ခွဲမှုရေးရာမှာ စီးပွားရေးအတွက်သာမက လူမှုရေးပိုင်းမှာပါ အားနည်းနေသူများ အတွက် အထူးရည်ရွယ်ထားပါသည်။
✅ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းနှင့် IGCSE ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားသူများ၊ စီးပွားရေးကို စိတ်ဝင်စားသော လူငယ် များ၊Professional Manager ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လိုသူများ၊ အောင်မြင်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်လိုသူများသည် ဒီ Advance Level Business Management Administration အတန်းကို တက်ရောက်ဖို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
✅ Advance level အတန်းတိုင်းအတွက် စာသင်ကြားမှု ပိုမိုထိရောက်စေရန်အတွက် လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားပါသည်။
Chapter 1: Business Management and Administration Management
Chapter 2: Concepts of Management and Management Level and Skills
Chapter 3: Nature of Business Economic System
Chapter 4: Source of Finance and Share of Capital
Chapter 5: Organizing Structure Planning
Chapter 6: International Management and Strategic for entering International Market
Chapter 7: Corporate Strategy Planning
Chapter 8: New Business Start up Plan
Teacher: U Pyae Phyo
Project Management ဘာသာရပ်မှာ ဘာတွေသင်မှာလဲ
Project တခုကို လုပ်ကိုင်တဲ့အခါ သိသင့်သိထိုက်ပြီး လိုအပ်နေတဲ့အခြေခံသဘောတရားများ
Project များကို တိကျသောအချိန် ကာလ များအတိုင်း ပညာသားပါပါ စီမံခန့်ခွဲခြင်းများ
Project manager တယောက်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
လုပ်ငန်းခွင်တွင် တွေ့ကြုံရမယ့် Risk Management များ
Project တခုကို ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် တွက်ချက်နည်း များ
Project ကာလကို အဆုံးသတ်ခြင်း၊ Report တင်ခြင်းများ
လုပ်ငန်းခွင်တွင် တွေ့ကြုံရမယ့် Risk များ
Online class တွေကို ဘာကြောင့်တက်သင့်သလဲ။
Stay Home ကာလမှာအိမ်မှာနေရင်း အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်မယ်။
အရင်ကအလုပ်မအားလို့ လေ့လာချင်ရက် မလေ့လာရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်။
နယ်က သင်တန်းသား/သူများအတွက်လည်း ပိုမိုထိရောက်တဲ့ အလုပ်အကိုင် ဗဟုသုတတွေတိုးစေမယ်။
Team applicationနဲ့ဆရာနဲ့တပည့် Face to Face သင်ကြားပေးလို့ မိမိမသိတာ ဆွေးနွေးချင်တာကို ချက်ချင်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Group ထဲကနေပြီးလည်း သင်ခန်းစာများ ဗဟုသုတများ quiz set မေးခွန်းများကို share ပေးထားမှာမို့ သင်ခန်းစာ တပတ်တပတ် စာလွတ်မှာလည်းမပူရဘူးပေါ့။
Sale Management Course
Sales Management သင်တန်းမှာ ဘာတွေသင်ရမလဲ?
Sales ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊
လူမှုဆက်ဆံရေး၊ ရောင်းဝယ်မှု နည်းဗျူဟာများနှင့် ကျွမ်းကျင်အောင်မြင် သော ဖြန့်ချိရေး ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် အဓိကအချက်အလက် များ၊
Sales သမားများတွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲများနှင့် ထိုအခက်အခဲ များကို ကျော်လွှားပြီး ရောင်းအားများ နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးမြင့် အောင်လုပ်ဆောင် ခြင်း နည်းလမ်းများ
Sales approach, Sales Techniques များကို စနစ်တကျ ချမှတ်ရေးဆွဲ တတ်ခြင်းများ
ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး customer များ လိုအပ်တဲ့ ထုတ် ကုန်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စားသုံးသူများနဲ့ ရေရှည် ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ခြင်း စတဲ့ အကြောင်းအရာများနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း လေ့လာ သင်ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Sales & Marketing field တွင် လက်ရှိဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပြီး self-development ယူလိုသူများ၊
Sales ကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ၊
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း/ SME တည်ထောင်ထားသူ လုပ်ငန်းရှင်များ
Sales ကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲလိုသူများ၊
ကျွမ်းကျင်အောင်မြင်သော ဖြန့်ချိရေးနှင့် အရောင်းမန်နေဂျာများ
Sales & Marketing ကွဲပြားမှုဆိုတာဘာလဲ သေချာ ဂဏနဏ မသိသေးသူများ ...
Sales & Marketing Field ထဲရောက်နေသော်လည်း ကိုယ့် Job Function ကို မသိသေးသူများ ..
Marketer ကောင်း .. Sales Fighter ကောင်းဖြစ်လိုပြီး Personal Development အတွက် Knowledge အခြေခံ ရယူလိုသူများ
Covid ကာလ အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိ အသုံးချချင်သူများ
1. Modern Selling and Types of Selling
5. Develop Personal Selling Skills
6. Sales Planning Process
7. Effective Sales Setting
8. Success factor for professional salesperson
ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ Marketing သမားကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အချက် (၄) ချက်
တစ်ဖက်လူနဲ့ လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်စေရန်
ကိုယ့် Product ကို ရောင်းမယ့် Market ကို ကောင်းမွန်စွာနားလည်စေရန်
အခြားလိုအပ်သော ဗဟုသုတပညာများ သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်
Marketing Management သင်တန်း မှာ ဘာတွေသင်ရမှာလဲ?
လုပ်ငန်းခွင်မှာ Perfect ဖြစ်ပြီးနေရာကောင်းရချင်ပါသလား?
အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာရော သတ်မှတ်အရည်အချင်းထက် ကျော်လွန်ပြီး ထူးချွန်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ချင် ပါသလား?
Sales & Marketing ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ ကွာခြားချက်များ။
Customer တွေရဲ့ Needs,Wants နဲ့ Demands တွေကို နားလည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
Market Research တွေကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
STP Marketing Strategy တွေ
B2B, B2C Plan များ
Marketing Plan နှင့် Budget Plan များ
Marketing Techniques နဲ့ Marketing Strategy အစရှိတဲ့ အရာတွေ သင်ကြားပေးမှာဖြစ်တာမို့ သင့်အနေနဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်သော Sales & Marketing သမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပါ တယ်။
သင်ကြားရမည့် Topic များကတော့
Sale target and Sales Strategies
Change management ဆိုတာ မိမိ အဖွဲ့အစည်းအတွက်လည်းကောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လည်းကောင်း၊ လူမှုဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် လည်းကောင်း အကျိုးရှိသော အပြောင်းအလဲများကို ပြုလုပ်ပြီး ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
Change management သင်တန်းမှာ ဘာတွေကို လေ့လာနို်ငမလဲ?
မိမိရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀နှင့် business မှာပါ တွေ့ကြုံလာတဲ့ အပြောင်း အလဲများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း၊
Theory များနှင့်ချိန်ထိုးပြီး အပြောင်းအလဲများကို ဦးဆောင်နိုင်ရန် နည်း လမ်းသစ်များ ရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဝန်ထမ်းများအား မိမိပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ထား သော မူဝါဒ များအား အလွယ်တကူ လ်ုက်ပါပြောင်းလဲနိုင်ရန် ကောင်းစွာ ဦးဆောင်နိုင်ခြင်း၊
နေ့စဉ်ဘ၀တွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် အပြောင်းအလဲများကြောင့် ခံစားနေရ သည့် စိတ်ဖိစီးမှုများကို ကောင်းစွာ စီမံလာနိုင်ခြင်း၊
အပြောင်းအလဲ များကို အသုံးပြုပြီး အကျ်ုးအမြတ်များ ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းလာနိုင်ခြင်း
အဖွဲ့အစည်းများထဲတွင် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည့်ပြောင်းလဲခြင်းပုံစံ များ၊ အပြောင်းအလဲများကို ကောင်းစွာ သိရှိနိုင်ဖို့ theory များ၊ အသုံးပြုနည်းများ၊ မဟာဗျူဟာများအား အသုံးချပုံများကို လေ့လာနိုင်ခြင်း
အပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည့် စိတ်ဖိစိမှုများကို ကောင်းစွာ စီမံနိုင်ခြင်း စသည့် အကျ်ုး ကျေးဇူးများရရှိနိုင်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/သူ လူငယ်များ စာတွေ့လက်တွေ့ ပိုမိုသိရှိလို သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
- Benefit of Change management for organization and individuals
- Level of Change Management
- Concept and Analysis techniques of Change Management
- Change management Theory
- Defining impact and implementation theory
- Types of change in organization
- Steps to effective change management process
စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် Business Management Administration (BMA) သင်တန်း မှာ ဘာတွေ လေ့လာသင်ယူနိုင်မလဲ?
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ အခြေခံအကြောင်းအရာတွေ Business ဆိုတာ ဘယ်လို မျိုးလဲ
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (Own Business) တည်ထောင်ရာတွင် တွေ့ကြုံရမည့် စိန်ခေါ်မှုတွေက ဘာတွေ လဲ
စီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေ Planning - ကြိုတင်စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း၊ Organizing - အရင်း အမြစ် များအား စုစည်းခြင်း၊ တာဝန်များ ခွဲဝေ သတ်မှတ်ခြင်း၊ Leading - ဦးဆောင်လွှမ်းမိုး ခြင်းညွှန်ကြားခြင်း Controlling - ကြီးကြပ်ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲခြင်း အစရှိတာတွေ က ဘာတွေ လဲ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ
Manager’s Skills & Roles ဦးဆောင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာစေရန် ရှိသင့်၊ တတ်ကျွမ်းသင့်၊ နားလည်သင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ သင်ယူမွေးမြူ ထား သင့်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေက ဘာတွေလဲ
လုပ်ငန်း တိုင်းမှာရှိတဲ့ Organization တွေ အကြောင်း အဖွဲ့အစည်း တွေရဲ့ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေ ၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ ပန်းတိုင်တွေ ချမှတ်ရေးဆွဲကြ ခြင်း ကို သဘောပေါက်နားလည်စေဖို့ Organization အမျိုးအစားတွေ၊ Organization တစ်ခုချဉ်းစီမှာရှိတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ ၊ သဘောတရား တွေနဲ့အတူ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေက ဘယ်လိုမျိုးလဲ
Entrepreneurship & Formation Of Business စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ကိုင် သူများအတွက် အလေးပေး နားလည်ထားသင့်တဲ့ အချက်တွေ ။ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းတည်ထောင် ဆောင်ရွက်လိုသူတွေ မိမိရဲ့ အခြေအနေ တွေ ကို လေ့လာဆန်းစစ် ရနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ဘာတွေလဲ အစရှိတာတွေ ကို Phoenix Learning Center ၏ Business Management Administration Online Course ပညာဒါနအတန်းမှာ လေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
Management နယ်ပယ်ကို စတင်ဝင်ရောက်မည့်သူများ
Business Management အကြောင်းစာတွေ့လက်တွေ့ ပိုမိုသိရှိလို သူများ အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
- What is Business Management and Management Function
- Manager’s Skills & Roles
- Concept of Business Management
- Types of Organization
- Excellent in management
- Important Business Functions
- International and small business management
- Business Analysis Model
Logistics and supply chain management ဆိုတာ
Business နဲ့ channel အားလုံးရဲ့ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း မှ အစပြု ပြီး ထုပ်ပိုးခြင်း သိုလှောင်သိမ်း ဆည်းခြင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း ကုန်စည် စီးဆင်းမှု များအားလုံး ကို မဟာဗျူဟာ ကျကျ စီမံဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။ မိမိ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အရည်သွေးကို မလျော့ဘဲ ကုန်ကျစရိတ်ကို အထိ ရောက်ဆုံး လျော့ချ နိုင်ဖို့ Logistics and supply chain management ကို သိရှိနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။
Logistics and supply chain Management ဘာသာရပ်မှာ ဘာတွေ သင်မှာ လဲ
ဝယ်ယူခြင်းမှအစပြုပြီး customer ထံသို့ ပစ္စည်းရောက်သည်အထိ စီမံခန့်ခွဲ ခြင်း၊
ဈေးကွက်တွင်း ယှဉ်ပြိုင်၍ အားသာချက် ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
logistics မဟာဗျူဟာ များ၊
ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး ဆိုင်ရာ သိရှိသိသင့်သည့် အကြောင်းအရာများကို သင်ကြားပေးမှာပါ။
Logistics လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ၊
Managerial level များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊
NGO မှ logistics စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်လုပ်ဆောင်သူများ၊
ကုန်ပစ္စည်း ပို့ဆောင်ရေး Delivery လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသူများ
Export, import လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသူများ
• Logistics functions and task
• Types of Logistics
• Logistics contribute to Competitive advantages
Accounting foundation class စာရင်းကိုင် ပညာရပ်ကို လေ့လာလိုသူများနှင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့ အခြေခံအကျဆုံး စာရင်းကိုင် သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။
စာရင်းကိုင်တစ်ဦးသိသင့်သိထိုက်သော Knowledge Sharing လုပ်ပေးခြင်း
Inventory အ၀င်အထွက် ရေးသွင်းခြင်း ၊
Inventory Valuation တွက် ချက်ခြင်းများ
Payment Vorcher and Receipt Vorcher များမှငွေစာရင်းရေးသွင်းမှု အသေးစိတ်များ
ပေးရန်ရှိ ရရန်ရှိစာရင်းများ ထိန်းချုပ်ခြင်းများ
စာရင်းကိုင် အလုပ်ဖြင့် စတင် လုပ်ကိုင်မည့်သူများ
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်နေပြီး စာရင်းအကြောင်း နားလည်လို သူ များ
လုပ်ငန်း တစ်ခု ဝင်ငွေ /ထွက်ငွေ အကြောင်းများ
စာအတွေ့အကြုံရှိပြီး လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ဖို့ အခက်ခဲဖြစ်နေသူများ
Teacher Khine Lay: Daw Khine Lay
Web Design Fundamental Course
Website ဆိုတာဘာလဲ …
Website ဆိုတာ အလွယ်တကူပြောရရင် ကိုယ့်ရဲ့ အိမ် (Or) Office (Or) ကိုယ်က ဘယ်သူပါ ဘယ်ဝါပါ ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ "FAST and INEXPENSIVELY" ကိုယ့်ကို လူအများသိစေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ PRODUCTS & SERVICES တွေကို အွန်လိုင်းကနေ တိုက်ရိုက်ရောင်းချနိုင်တဲ့ ၊ ယုံကြည်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Impression မြှင့်စေတဲ့ Platform တစ်ခုပါ
ဘယ်လိုမျိုးသူတွေက ဦးစားပေးပြီးလေ့လာသင့်လဲ ...
ကိုယ့်လုပ်ငန်း ရဲ့ Company Website များ
ဥပမာ အခုလိုကာလမှာ လုပ်ငန်း Image လည်း မကျသွားအောင် cost လေးလည်း လျော့ချပြီး Save ဖြစ်အောင် အပြင်မှာ အပ်မယ်ဆို ပေးရတဲ့ cost တွေက များနေတော့ SME လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ် တက်ထားမယ်ဆို အရမ်းကောင်းပါတယ်
Instant Articles တွေ Content တွေ ရေးပြီး Blog Website တွေ ဖန်တီးပြီး ဝင်ငွေရှာချင်သူတွေ
ဒီတိုင်း ကိုယ့်အနေနဲ့ ဝါသာနာပါလို့လေ့လာချင်သူတွေ
Freelancer အနေနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုပြီး Service ပေးချင်သူများ
အထူးသဖြင့် Online Shops လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေ နောက်ပိုင်းဆို ကိုယ်ပိုင် Domain Name နဲ့ Ecommerce Platform ပေါ်မှာပဲ တရားဝင်ရောင်းချတော့အခါ အကုန်အကျသက်သာပြီး ကိုယ်တိုင်နားလည် ဖန်တီးချင်သူတွေ အားလုံး တက်ရောက် သင့်တဲ့ ၊ လေ့လာထားသင့်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါ တယ်။
Week 1: HTML Basic
Week 2: CSS Basic
Week 3: Java Script Basic
Week 4: Web Design Template
Teacher Moe Moe Khaing: Daw Moe Khaing Oo
Computer Basic Courseတွင်
Microsoft Word 2016 စာစီစာရိုက်ပြုလုပ်ခြင်း
Microsoft Excel 2016 စာရင်းဇယားများပြုလုပ်ခြင်း
Microsoft PowerPoint 2016 Presentation တင်ပြချက်များ ဆောင်ရွက် တက်စေရန်
Email and Internet အသုံးပြုတတ်ခြင်းတို့ကို သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်
ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ computer ပိုင်း မတတ်ကျွမ်းလို့ မိမိအလုပ်မှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေသူများ
Computer အခြေခံ မတတ်လို့ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရခက်ခဲနေသူများ
Computer ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်လိုသူများ
Computer Basic ကိုအပြင်မှာတက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေသူများ
သင်တန်းတက်ပြီးမေ့နေသူများ ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့ သင်တန်း ဖြစ်ပါတယ်။
Advance Level Web Design & Development (1)
Advance Level Project Management (1)
Advance Level Business Management & Administration (1)
Advance Level Logistics & Supply Chain Management (1)
Computer Subject (1)
Partners and clients believe in us